बिचरा खेल्ने पढ्ने उमेरका ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा मृ’त्युको पर्खाइमा ! (एक सेयरले कसैको भलाे हुनेछ) – Onlines Time
February 11, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on बिचरा खेल्ने पढ्ने उमेरका ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा मृ’त्युको पर्खाइमा ! (एक सेयरले कसैको भलाे हुनेछ)
कस्तो अनुभव हुन्छ त्यो सोच्नै सकिदैन्। हो एउटा त्यस्तै घटना घटेको छ तामाङको परिवारमा ।उनी ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङ हुन, जो अहिले Neuroblastoma (Metastatic bone cancer) चौथो स्टेजको क्यान्सरले जिवन- मरणको लड़ाईमा छन् । उपचारको लागि लगभग ४० लाख लाग्ने परिवारले जनाएको छ। उनको परिवारको आर्थीक अवस्था नाजुक हुनाले उपचारको लागि सहयोग चाहिएको छ । इच्छुक व्यक्तिले ९८१८६०३६५४ /9818603654 मा सम्पर्क गर्नु होला ।
सियोना श्रेष्ठ बचाउ अभियान: सके सहयोग गर्नुहोला नसके सक्दो शियर गर्नुहोला। नेपाल स्कटल्यान्ड एसोसिएसन परिवार तथा स्कटलैण्डबासी/ सामाजिक अभियन्ता द्वारा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक रोगसँग लडिरहेकी नाबालिका सियोना श्रेष्ठलाई केही आर्थिक सहयोग गरेका छन्। थोपा थोपा मिलेर नदी र नदी नदी मिलेर समुन्द्र बने झैं सबैको प्यारी सियोनाको उपचारका लागि संसार बाट सहयोगमा, यस नेपाल स्कटलैण्ड एसोसिएसन द्वारा पनि केही आर्थिक रकम सहयोग गरेका छन्।स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक रोगसँग लडिरहेकी सियोनाको उपचारका लागि करिव २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन्। डेढ वर्षकी सियोनाको हाल उपचार भइरहेको छ।